Garoonka Caalamiga Ah Ee Sida Casriga ah Loo Dhisayo Oo Si Habsamileh Usocda - Cakaara News
Garoonka Caalamiga Ah Ee Sida Casriga ah Loo Dhisayo Oo Si Habsamileh Usocda
Jigjiga(cakaaranews) Sabti 22ka April 2017. Garoonka caalamiga ah ee sida casriga ah loo dhisayo islamarkaana ay siwada jir ah shaqada dhismihiisa ay ufulinayaan wakaalada dhismaha iyo adeegyada gaarka ah ee booliska, shirkada dhismaha hawlaha biyaha iyo waliba shirkada xaawo aadan ayaa meel fiican maraysaa shaqadiisu.
Hadaba, garoonkan casriga ah oo kufadhiya dhul dhan 6 KM islamarkaana awood uleh inuu qaado dad kor u dhaafaya 60,000 oo shaqsi, shaqadiisuna kasocto xarunta deegaanka ee magaalada jigjiga gaar ahaan dhinaca koonfureed ee magaalada ayaa waxaa miisaaniyadiisa fulinaya Xukuumada DDSI. Dhismaha Garoonkan ayaa waxaa warbaahinta deegaanka uga waramay Agaasinka mashruucan dhismaha garoonka casriga ah oo katirsan shaqaalaha wakaalada dhismaha, iibka iyo adeegyada gaarka ah ee booliska mudane Cabdinaasir Huruufe oo sheegay in mashruucan garoonka caalamiga ah ee sida casriga ah loo dhisayo ay meel fiican maraysao shaqadiisu. Wuxuuna xusay in dhismaha mashruucan ay siwada jir ah shaqada dhismihiisa u fulinayaan wakaalada dhismaha iyo adeegyada gaarka ah ee booliska, shirkada dhismaha hawlaha biyaha iyo waliba shirkada xaawo aadan. Agaasinka oo hadalkiisa sii wata ayaa tilmamaay in shaqaalaha mashruucu ay uqaybsan yihiin sadex qaybood islamarkaana ay kutartamayaan maadaama uu yahay garoonkani kii ugu horeeyay oo casri ah ee deegaanka laga dhiso. Wuxuuna sheegay in ay balanqaadayaan in habeen iyo maalin maskax iyo muruqba ay kashaqaysiinayaan.
Dhankakale agaasinaka ayaa tilmaamay in dhismaha garoonku uu marayo wajigiisii 1aad oo ah qodista iyo xaadhista iyadoo hooslooqadayo 9miter. Wuxuuna carabka kudhuftay in dhalinyar badan oo deegaanka u dhashay ay shaqo abuur kaheleen.
Iskusoowada duuboo waxaa xusud mudan in wakhtiyar kahor ay mashruuca garoonkan caalamiga ah ee sida casriga ah loodhisayo ay siwada jir ah u dhagax dhigeen madaxwaynaha JDFI mudane Mulato Toshome iyo madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar